बाल संजालको शुभकामना आदान प्रदान – Rajmarg Online
दाङ, कार्तिक ५ । घोराही उप–महानगपालिका वडा नं. १४ को वडा स्तरिय बाल संजालले शुभकामना आदान प्रदान सम्पन गरेको छ । वडा स्तरिय बाल संजालको आयोजनामा भएको कार्यक्रममका बोल्ने बत्ताहरुले समाज परिर्वतनका लागि बाल बालिकाको भुमिका महत्व पूर्ण हुने वताएका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ का अध्यक्ष शक्तिराम डाँगीले घोराही उप–महानगरपालिका बालमैत्री नगर बनाउँनका लागि भुमिका खेल्नु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। प्रमुख अतिथी समेत रहनु भएका डाँगीले आगामी बर्ष सम्म वडा नं. १४ लाई बालमैत्री घोषणा गर्ने तयारी रहेको बताउँदै त्यसका बालबालिकाले सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यस अबसरमा वडा प्रहरी कार्यालय घोराहीका प्रमुख शशी शर्माले बालबालिका दुर्वेशनीबाट बच्नु पर्ने उल्लेख गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा वडा सदस्य गुलाम रशुल,फुलमति नेपाली, पत्रकार महासंघ दाङका सदस्य जनक नेपाली, युवामोर्चाको अनिल सेर्पाली लगाएतले बोल्नु भएको थियो । बाल संजालका अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश नेपालीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको संचालन सचिव कमला डाँगीले गर्नु भएको थियो ।